किन उठेन लक्षित राजस्व ? | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय किन उठेन लक्षित राजस्व ?
on: May 22, 2019 सम्पादकीय
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि राखेको राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महीनामा लक्ष्यको ५२ दशमलव ४४ प्रतिशतमात्रै राजस्व संकलन भएको छ । बाँकी दुई महिना अवधिमा सरकारी लक्ष्य पूरा हुन्छ भनेर पत्याउन सकिँदैन । राजनीतिक स्थायित्व सहितको झन्डै दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारले पनि लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन किन सकेन त ?
अहिले लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठे पनि राजस्व बचत छँदै छ । यसको अर्थ पनि बजेट निर्माणमा गम्भीर त्रुटि छ भन्ने हुन्छ । यो वित्तीय अनुशासनहीनता हो ।
सरकारले आफ्नो सामर्थ्यभन्दा ठूलो लक्ष्य लिएकाले लक्ष्य पूरा नभएको हो कि भन्ने पहिलो प्रश्न आउँछ । तर, सरकारले राजस्वका लागि लिएको लक्ष्य ठूलो हो भन्ने आधार छैन । उसले सोचविचार गरेर नै लक्ष्य लिएको हो । बजेट भाषणपछि बढी लक्ष्य लिएको भनी प्रश्न उठाइएकोमा अर्थमन्त्री र समस्त राजस्व प्रशासनले यो लक्ष्यको पक्षमा वकालत गरेका थिए । अर्थमन्त्री तथा राजस्व प्रशासनले यो लक्ष्य वास्तविक हो, सम्भव छ भनेर प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
बजेटमा लोक रिझ्याइँका लागि राखिएका कार्यक्रममा छुट्याइएको खर्चलाई राजस्वबाटै पर्याप्त स्रोत जुट्छ भन्ने देखाउन राजस्व लक्ष्य बढी राखिएको हुनुपर्छ । पूँजीगत खर्च पनि लक्ष्य अनुसार नहुने जान्दाजान्दै पूँजीगत खर्चका लागि बढी बजेट देखाउन पनि अनुचित रूपमा बढी चालू खर्च बजेट छुट्याउने बहानामात्रै हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अहिले लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठे पनि राजस्व बचत छँदै छ । यसको अर्थ पनि बजेट निर्माणमा गम्भीर त्रुटि छ भन्ने हुन्छ । यो वित्तीय अनुशासनहीनता हो ।
राजस्व कम उठ्ने अर्को सम्भाव्य कारण भनेको लक्ष्य अनुसार व्यवसायको विस्तार नहुनु हो । तर, केन्द्रीय तथ्यांक विभागले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन गतवर्षकै हाराहारीमा बढेको देखाएको छ र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू यो आँकडा गर्वसाथ प्रस्तुत गरिरहेका छन् । अहिले उठेको राजस्व हेर्दा भ्याट र अन्तःशुल्क मार्फत आउने रकम बढेको देखिन्छ । यसको अर्थ व्यवसाथ थप विस्तार भइरहेको छ भन्ने नै हो । तैपनि राजस्व संकलन लक्ष्य अनुसार किन उठेन त ?
राजस्वमा कमी आउनुको अर्को कारण हुन सक्छ : आयात कम हुनु । नेपालको राजस्वमा सबैभन्दा ठूलो स्रोत भ्याट नै हो र त्यो उठ्ने प्रमुख स्रोत आयात नै हो । तर, आयात उल्लेख्य रूपमा बढेको छ ।
राजस्व संकलन कम हुनुमा सरकारले विभिन्न छूट दिएकाले हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । विगतमा सरकारले मोबाइल लगायत वस्तुमा भ्याट फिर्ता दिँदै आए पनि अहिले यो छूट दिन छाडिएको छ । त्यस्तै आयकरमा पनि कुनै छूट दिइएको छैन । यद्यपि आयकर नेपालमा राजस्वको त्यति ठूलो स्रोत भने होइन ।
माथिका यी कारण होइनन् भने राजस्व कमी आउनुमा कर प्रशासनको निकम्मापन जिम्मेवार छ भन्नुपर्ने हुन्छ । राजस्वमा काम गर्न नजान्ने मान्छे भएर यसो भएको पनि होइन । व्यवसायी हुन् कि सर्वसाधारण सबैको अनुभव एउटै छ : करका हाकीमहरू कसैलाई त्यसै छाड्दैनन् । अर्थात्, राजस्वका कर्मचारीमा सानातिना व्यवसायीलाई निचोरनाचर पारेर करको लक्ष्य पूरा गर्ने तर ठूलो कर तिर्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरेका छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
राजस्व उठेको पनि खर्च हुन नसकिरहेको देखेर थप राजस्व उठाउन नै वास्ता नगरिएको त पक्कै पनि होइन होला । जेठ १५ मा बजेट भाषण गर्दा अर्थमन्त्रीले राजस्व कम उठ्नुको कारण बताउलान् कि लक्ष्य पूरा गर्न विगतमा झैं कुनै तिकडम पनि गर्लान् ?